Safiirka Kenya ee Somalia oo shaaciyay tirada dadka Kenya ee ku nool Somalia - Caasimada Online
Home Warar Safiirka Kenya ee Somalia oo shaaciyay tirada dadka Kenya ee ku nool...
Safiirka Kenya ee Somalia oo shaaciyay tirada dadka Kenya ee ku nool Somalia
Muqdisho (Caasimada Online) – Danjiraha dalka Kenya u fadhiya Somalia Mr Lucas Tumbo ayaa shaaca ka qaaday inay helayaan macluumaad muujinaaya in Kenyaanka ugu badan ee qaxooti ah ku noolyihiin Somalia.
Danjire Lucas Tumbo, waxa uu sheegay inay xaqiiqsadeen in Kenyaanka ugu badan ee ku nool dal African ah ay yihiin kuwo ku dhex nool Somalia, kuwaa oo uu cadeeyay inay Somalia u joogan shaqooyin kala duwan.
Waxa uu Mr Lucas Tumbo tilmaamay in qurbojoogta ugu badan ee Kenyanka ah ee jooga Somalia ay yihiin kuwo xoogsato ah, halka qaarna ay yihiin Ganacsato.
Mr Lucas Tumbo oo ah Danjiraha ayaa sheegay in qurbojoog Kenyaanka ah ee joogta Somalia tirro ahaan ay kor u dhaafeyso 35,000 qof.
Danjiraha waxa uu carab dhabay in qurbajoogta Kenyaanka ah ee ku nool Somalia ay yihiin kuwo ku kala nool “18,000 waxay ku nool yihiin Hargeysa,10,000 Jubaland iyo 3,000 oo ku nool Muqdisho iyo weliba deegaano kale,” ayuu yiri.
Sidoo kale, Mr Lucas Tumbo ayaa cadeeyay in ka Safaarad ahaan ay kawarqabaan dhammaan muwaadiniintaasi, waxa uuna cod dheer ku sheegay inuu kala dhexeeyo xiriir.
Si kastaba ha ahaatee, Mr Lucas Tumbo ayaa Dowlada Somalia uga mahad celiyay sida ay usoo dhaweysay Muwaadiniinta Kenyaanka ah, isagoo cadeeyay in Somalia iyo Kenya ay yihiin kuwo uu ka dhexeeyo xiriir wanaagsan.